Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Soo Celinta Safarka Cirka ee Juun Way Sii Socotaa Niyad jab
Baahidu aad bay uga hooseysaa heerarkii ka horeeyey COVID-19 taas oo ay ugu wacan tahay xannibaadaha socdaalka ee caalamiga ah.
Baahida guud ee safarka hawada bisha Juun 2021 (oo lagu cabiray kilomitirrada rakaabka ee dakhliga ama RPKs) ayaa hoos u dhacday 60.1% marka la barbar dhigo Juun 2019.
Dalabka rakaabka caalamiga ah bishii Juun wuxuu ka hooseeyay 80.9% Juun 2019.
Wadarta dalabka gudaha ayaa hoos u dhacay 22.4% marka loo eego heerarkii qalalaasaha kahor (Juun 2019).
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu ku dhawaaqay waxqabadka dalabka rakaabka ee Juun 2021 oo muujinaya horumar aad u yar labadaba suuqyada safarka hawada ee caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Baahidu aad bay uga hooseysaa heerarkii ka horeeyey COVID-19 iyadoo ay ugu wacan tahay xayiraadaha safarka ee caalamiga ah.
Maaddaama isbarbardhigyada u dhexeeya 2021 iyo 2020 natiijooyinka billaha ah ay ku qalloocan yihiin saamaynta aan caadiga ahayn ee COVID-19, haddii aan si kale loo xusin, isbarbardhigyada oo dhan waa Juun 2019, oo raacay qaab dalab caadi ah.
Dalabka guud ee safarka hawada bishii Juun 2021 (oo lagu cabiray kilomitirrada rakaabka ee dakhliga ama RPKs) ayaa hoos u dhacay 60.1% marka la barbar dhigo Juun 2019. Taasi waxay ahayd horumar yar marka loo eego 62.9% hoos u dhac la diiwaan geliyey May 2021 iyo May 2019.
Dalabka rakaabka caalamiga ah bishii Juun wuxuu ahaa 80.9% bishii Juun 2019, taasoo ka soo hagaagtay hoos u dhac 85.4% oo la diiwaan geliyey May 2021 iyo laba sano ka hor. Dhammaan gobollada marka laga reebo Aasiya-Baasifigga waxay gacan ka geysteen dalabka xoogaa sare.
Wadarta dalabka gudaha ayaa hoos u dhacay 22.4% marka loo eego heerarkii hore ee xasaradaha (Juun 2019), xoogaa faa'iido ah marka loo eego 23.7% hoos u dhac la diiwaan geliyey Maajo 2021 iyo muddada 2019. Waxqabadka guud ahaan suuqyada gudaha ee muhiimka ah waxaa lagu qasay Ruushka oo ka warbixiyay ballaarinta xooggan halka Shiinuhu ku noqday dhul taban.
“Waxaan aragnaa dhaqdhaqaaq ku socda jihada saxda ah, gaar ahaan qaar ka mid ah suuqyada gudaha ee muhiimka ah. Laakiin xaaladda socdaalka caalamiga ahi meelna uma dhow meesha aan u baahan nahay. Bisha Juun waa inay noqotaa bilowga xilliga ugu sarreeya, laakiin shirkadaha duullimaadku waxay wadeen 20% kaliya heerarka 2019. Taasi ma ahan soo kabasho, waa xiisad sii socota oo ay sababtay wax -qabad la’aanta dowladda, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.